VIDEO: Xiddigaha xulka qaranka Soomaaliya oo diyaar-garoowgii ugu dambeeyey ugu jira tartanka Chan Cup – Gool FM
(Muqdisho) 18 Luulyo 2019. Wiilasha Ocean Stars ayaa diyaar-garoowgii ugu dambeeyay ugu jira tartanka Chan cup oo sanadkaan ay ka qeyb yihiin xulalka ka qeyb-galaya koobkan.
Caadiyan Tartankan waxaa ciyaara xiddigaha ka dheela horyaallada dalkooda, sida muuqata xulka qaranka ayaa sanadkaan bidhaaminaya hannaan ciyaareed wanaagsan tiiyo ay jirto in muddo ay tababar adag ku qaadanayeen xerada farsamada xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ee Garoonka Jaamacadaha.
Xulka qaranka Soomaaliya ayaa sanadkan waxaa ka soo muuqanaya xiddigo cusub oo ay kamid yihiin; Xasan Santo iyo Cali Cadde, kuwaasoo ku faraxsan inay matalan xulkeenna qaranka ee Ocean Stars.
Warbixin dheer oo ku aaddan halka uu tartankan Chan Cup ka dhici doona xilliga uu ciyaari doono xulkeenna Soomaaliya waxaa inoo diyaariyey Wariyaheenna C/fitaax C/rashiid Abuukar (Nani) ee ka daawo muuqaalka hoose.